एश्वर्य र कट्रिनालाई सलमान खानले यस्तोसम्म गरेका रहेछन्, जुन कुरा सुनेपछि सबैको होस् उ’ड्यो ! – Life Nepali
एश्वर्य र कट्रिनालाई सलमान खानले यस्तोसम्म गरेका रहेछन्, जुन कुरा सुनेपछि सबैको होस् उ’ड्यो !
एजेन्सी । बलिउडका दबंग खान सलमान खानले आफ्नो एक्स गर्लफ्रेन्डद्धए एश्वर्य र कट्रिनाको बारेमा सार्वजनिक ठाउँमै गरे आफुसंग सम्बन्ध रहंदा भएको कृयाकलापहरु सार्वजनिक । उनले यी दुई प्रेमीकाहरु आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्वपुर्ण पात्रका रुपमा रहेको बताउँदै जब यी दुईसंग आफु प्रेममा रहंदा गरिएको कुराहरु सुनाए तब सुन्ने सबै एकअर्कालाई हेरेको हेरै भए । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
जब सलमानले आफ्नो प्रेम, प्रेमीका र प्रेमीकाहरुसंगको गुनासो व्यक्त गरे त्यतिबेलाको माहोलमा सन्नाटा छाएको थियो । किनभने सलमानले यी दुवैसंग सम्बन्ध तोडिएपछि पहिलो पटक मुख खोलेका थिए । यतिमात्रै नभई आकर्षण अन्य महिलाहरुमा भएता पनि प्रेम भने अब हुन नसक्ने बताए । *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
Previous भिडियो हेर्नुहोस् !! बाटोमा भाईरस नाचेको गीत भा’ईरल’ !!
Next ‘कोठामा श्रीकृष्णको तस्विर सजाउन दिनेसँग मात्रै विवाह गर्छु’ : श्वेता खड्का